စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့ကို သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံ | Ministry of Planning, Finance and Industry
Posted By : editor, Date : 17.09.20190comment
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tim Enderlin ကို ၁၆-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၀: ၀၀ )နာရီတွင် လည်းကောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. LEE Sang-hwa ကို ၁၆-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၄: ၀၀ )နာရီတွင် လည်းကောင်း စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၆)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက် ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (Myanmar Sustainable Development Plan) တွင် နိုင်ငံအတွက် ထားရှိသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်များကို ထည့်သွင်း ပါရှိမှုများအားလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းများကို MSDP ၏ လွှမ်းခြုံမှုအောက်တွင် ပြည်သူ့ရင်းနှှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်းဘဏ် (Project Bank)အဖြစ် တစ်စု တစ်ဝေးတည်း ထားရှိအကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေအနေ များကိုလည်းကောင်း၊ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် မြေနှင့် အဆောက်အအုံ သတင်းအချက်အလက်ဘဏ် ( Land and Property Bank )နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များ ကိုလည်ကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ(MSMEs) ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှု ကိစ္စရပ်များကိုလည်းကောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ကိုရီးယားသံအမတ်ကြီးမှ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်အတွင်း စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခဲ့မှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာ-ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
တွေ့ဆုံပွဲများသို့ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်၊ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။